Cube I7 Remix OS: Ireto ny hevitro | Androidsis
Ny zoma lasa teo, natolotro anao ny famerenana sy famakafakana feno iray amin'ireo Takelaka Android tsara indrindra fa nahafaly ahy ny nisedra manokana. Ny takelaka dia ilay Cube I7 Cx Remix OS, takelaka misy Android 4.4.4 Kit Kat, na dia miaraka amina sosona fanamboarana izay te-hanahafana an'i Windows 8 aza izay holazaina ny marina, ny fiheverana voalohany nomena ahy dia tsy hoe tena tsara izy io, ary bebe kokoa noho ny kilema fanampiny nanampy ny tsy fahafahany manova ny Launcher, iray amin'ireo lehibe Fampandehanana atolotry ny Android antsika ary tsy mitovy amin'ny rafitra fiasa hafa ho an'ny finday.
Raha nanao ny famerenana tamin'ny herinandro lasa aho, mbola resy lahatra tanteraka amin'ny mety ho takelaka, ny tantara fa tsy afaka manova ny Launcher dia mbola nahalasa ahy ihany, ary koa, nanondro aho ary naneho hevitra ho iray amin'ireo ampahany ratsy amin'ny fampisongadinana ny Cube I7 Remix OS. Taorian'io famerenana io dia noraisiko ilay takelaka ary nanapa-kevitra ny hanery azy araka izay tratra aho mba hahitana ny fahafenoany, nametraka ny fikasana tsy hampiasa ny solosainako mihitsy aza aho, farafaharatsiny araka izay azo atao sy raha mbola afaka manao ny miasa avy amin'ny Tablet Cube I7 CX mihitsy. Manomboka amin'ity herinandro ity dia misy ny traikefa ananako hatramin'ny gony, izay tsy nila nampiasa na dia indray mandeha monja aza ny solosainako manokana, lazaiko aminao anio ny fahatsapako amin'ity takelaka Android manaitra ity izay tsy isalasalana fa ho ahy, iray amin'ireo ny safidy tsara indrindra amin'ny lafiny fampisehoana sy ny kalitao / ny tahan'ny vidiny.
1 Fampivoarana mahomby amin'ny rafitra fiasa Android
2 Aza mieritreritra akory ny hanova ny Launcher
3 Fitantanana loharano tena tsara
4 Mampiseho ny retina mampihetsi-po na dia amin'ny tara-pahazavana mamirapiratra aza
5 Batera sy fampisehoana mahatalanjona fotsiny
Fampivoarana mahomby amin'ny rafitra fiasa Android
Na dia ny fiheverana voalohany aza, ny fahitana takelaka Android mbola misy kinova Android Kit Kat, izany hoe Android 4.4.4 dia tsy dia tsara loatra, tokony ho marin-toetra amin'ity lafiny ity isika ary hahita ny fanatsarana sy ny asa lehibe izay nataon'ny mpandraharaha. Remix OS, que nanitsy ny rafitra fiasa amin'ny alàlan'ny fitaovana faran'izay avo indrindra sy ny masontsivana momba ny Tablet Cube I7 CX, Tokony holazaina fa io no kinova Android mety, izay tsy maintsy entin'ity Tablet Android ity, ary mieritreritra bebe kokoa ny olan'ny fanjifana bateria na koa ny fanjifana RAM mihoampampana izay itarainan'ny mpampiasa faran'ny Android Lollipop. .
Etsy ankilany, mahafantatra izany efa misy ny kinova Lollipop an'ny Remix OS mifanentana amin'ity takelaka Android ity, dia antony tokony hankalazana sy hiandrasana am-pitoniana ny fanavaozana azy io rehefa heverin'ny ekipa fampiroboroboana Remix OS na Cube fa mety. Amin'izao fotoana izao dia mitaky be loatra amin'ny fanavaozana aho ary manana ny kinova Android farany napetraka foana, tsy mieritreritra ny hanao izany akory aho, ary izany dia ity takelaka ity koa dia miasa amin'ny Android Kit Kat izay tsy manadino an'i Lollipop mihitsy.
Aza mieritreritra akory ny hanova ny Launcher
Na dia efa noresahiko tamin'ny androny aza sy ny Launcher an'ny Cube I7 CX Remix OS dia tsy azo ovaina, amin'izao fotoana izao, aorian'ny fampiasana tapa-bolana, ny iray farany mahery, Ary tsy heveriko ny safidy hanandrana hanova an'ity Launcher namboarina ho fenitra ity, ary araky ny nolazaiko dia natao hanodinana tanteraka ao amin'ny Cube I7 CX Remix OS izy rehetra.
Marina fa tamin'ny voalohany dia sarotra tamiko ny nahazo ilay hevitra hoe izay ihany no nisy, fa rehefa ampiasainao sy ampiasainao io dia tsapanao fa ny tsara dia tsara, ary amin'izao fotoana izao, tsy tiako ny mandehana amin'ny lohan'ny loha avy amin'ny Launcher amin'ny Remix OS.
Fitantanana loharano tena tsara
Mikasika ny fitantanana loharanom-pahalalana izay ataon'ny Remix OS ao amin'ny goba I7 CX, ny marina dia tsy manana zavatra ratsy holazaina aho, ary koa, zavatra tsara daholo izy ireo satria na firy na firy ny fisokafako misokatra miaraka amin'izay dia matetika aho. miasa miaraka aminà tabilao Google na telo na efatra farafahakeliny, miampy ny fampiharana Gmail na Inbox, fampiharana Hangouts, Skype, Es File Explorer, Twitter ary Facebook izany rehetra izany dia mihodina tsara any aoriana ary tsy mbola hitako akory ny fihemorana na ny fahaverezan'ny zavatra rehetraAnkoatr'izay, ny RAM dia mbola tsy nihoatra ny 1,65 Gb fahatsiarovana nozahana, ka namela RAM mihoatra ny 600 Mb afaka mbola mihazakazaka fampiharana bebe kokoa ao aoriana.
Mampiseho ny retina mampihetsi-po na dia amin'ny tara-pahazavana mamirapiratra aza
Ny efijery an'ny Cube I7 CX Remix Os dia iray amin'ireo tanjaka amin'ity takelaka Android manaitra ity dia azo jerena avy hatrany izany amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Tablet any ivelany sy amin'ny tara-pahazavana mamirapiratra. takelaka iray izay nahatonga ahy ho resy lahatra tanteraka ny traikefa ara-pahefana ary koa ny traikefa multimedia.
Batera sy fampisehoana mahatalanjona fotsiny
Momba ny batterie an'ny terminal, araka ny hitanao tao amin'ny horonantsary eo an-tampon'ity lahatsoratra ity izay ampidiriko pikantsary izay anehoako anao ny 14 ora sy tampon'ny hetsika, dia tsy isalasalana fa iray hafa amin'ny tanjaky ny Cube I7 CX Remix OS.
Mikasika ny fahombiazana sy ny kalitaon'ny fikirakirany Intel Atom dia tsy azo lavina izy io, processeur tsy mahazo hafanana akory na firy na firy no omenao azy, eny fa na dia mihazakazaka tontolo andro aza miaraka amin'ity onjan'ny hafanana mamely an'i Espana izay tsy hain'ny olona intsony ity.
Farany, ny fehin-kevitra farany azoko dia eo alohanay Tablet Android manaitra izay tsy misy fialonana amin'ny takelaka hafa izay misy vidiny telo aza. takelaka Android mampihetsi-po miaraka amin'ny efijery retina mahatalanjona amin'ny famaha FullHD, processeur Quad Core 2 Gb an'ny RAM mahatalanjona mihoatra ny niandrasana ny rafitra miasa Kat Kat sy ny Remix OS.
Azoko lazaina aminao fotsiny fa raha mitady takelaka Android tsara ianao, mifantoka amin'ny famokarana ary amin'ny vidiny mihoatra ny fanitsiana dia tadidio fa ny Tablet ihany 150 euro mahery ny vidiny ary ny setin'ny Tablet bebe kokoa Ohatra kely io ambanin'ny 200 euro, La Tablet Cube I7 CX Remix Os Tsy isalasalana fa safidy fividianana tsara tokoa raha raisina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Cube I7 Remix OS: Ireto ny zavatra tsapako taorian'ny roa herinandro niasan'ny tablette mafy
Armando dia hoy izy:
Tena tsara izany. Fanontaniana iray… ny tsy fisian'ny «Ñ» eo amin'ny fitendry, ahoana no hamahanao azy?
Mamaly an'i Armando
Raha apetrakao amin'ny Espaniôla ao Espana ny kitendry, dia ho hitanao amin'ny toerana mahazatra ny endri-tsoratra Espaniola rehetra na dia tsy hita eo amin'ny fitendry aza ny Ñ na.
Aha, sary an-tsaina izany. Ny marina dia tsara tarehy toa ekipa faharoa 😉
Izany fisalasalana izany dia an'ny an'ny taratasy Ñ, ary ny marina dia tiako ity takelaka ity, tsy dia tiako loatra ny windows, mpankafy android aho, zavatra iray hafa azonao ampifandraisina amin'ny mpanonta pirinty, haneho hevitra aho izany satria tsy nanana an'io safidy io ny chrome ary remix os Eny?
Alex_SAF dia hoy izy:
Afaka manampy ahy ve ianao? Vao nahazo Cube I7 Remix aho ary nianjera tamin'ny fijerena multimedia, izany hoe, mandeha tsara ny zava-drehetra hampiasa azy io, fa ny mijery horonantsary, na seriesdroid, pelisdroid, mitele, atresplayer, youtube na sarimihetsika avy amin'ny usb avy amin'ny otg na avy amin'ny tahiry anatiny ( miaraka amin'ny mpilalao mx dia mitranga izany, miaraka amin'ny vlc dia miasa tsara avy amin'ny usb na fahatsiarovana anatiny), manelingelina izy, mikorontana ny audio ary tsy fantatro raha olako manokana io na an'ity maodely ity amin'ny ankapobeny. Raha tsy maharesy anao ny fahitana haino aman-jery mihoatra ny 40 minitra dia hividy iray hafa amin'ny magazay hafa aho ary hanararaotra an'io tranga io, ny vera maotina sy ny klavier (mazàna dia tsy mahomby aho rehefa mafana, ary indraindray rehefa marina izany nivadika ihany koa), ary raha sendra anao koa ity dia averiko ary hividy maodely hafa… MANKASITRAKA !!
Valio amin'i Alex_SAF
TSY MISY AZO ATAO Hampiasa ny TABLET raha tsy amin'ny teny espaniola
Toa tsy mampino ny toa an'ity lahatsoratra ity toa dokambarotra miery ...
Amin'izao fotoana izao dia tsy azo ampiasaina amin'ny Espaniôla ilay takelaka, tsy azo atao ny mamaky azy satria manasaraka ny litera amin'ireo teny misy accents izy… .Misy olana maro amin'ny Tablet Cube I7 Remix. Ny voalohany dia tsy manana ny teny Espaniôla napetraka (Sinoa sy Anglisy ihany)… Ny faharoa dia ny litera ñ tsy miseho amin'ny tranokala rehefa mijery Internet, google milalao sns ………………………. (pinky vs pinky)… Ny fahatelo dia rehefa misy accent ny teny iray dia misaraka amin'ilay teo aloha ilay litera miaraka amin'ilay manaraka (mahazo aina vs mahazo aina) .. (nanomboka vs natomboka). Averiko indray, amin'ny teny espaniola dia tsy mety ny mampiasa ny tabilao.
Rehefa dinihina ny fanjifana avoakan'ny vokatra elektronika any Espana raha ampitahaina amin'ny firenena hafa dia aza manahy ny hametraka ny OS amin'ny Espaniôla sy hamaha ireo olana ireo. Matahotra aho sao tsy hamidy firy eto ...
Tsy izany no izy, ry namako, efa roa volana mahery aho no nanana ny Tablet ary ampiasaiko ara-dalàna tanteraka izany, raha marina fa amin'ny ankapobeny dia tsy voalamina amin'ny teny Espaniôla ny fitendry fa voavaha avy amin'ny toeran'ny fitendry ao amin'ny menio ny fipetrahana Tablet izay manana fiteny Espaniôla, averiko indray: Eny manana fiteny Espaniola izy io.
Etsy ankilany, mitondra ny Ñ izy io, na dia mividy ny keyboard keyboard aza ianao dia misy endrika hafa amin'ny lakile raha tsy Espaniôla, izay namaha ny fividianana kitapom-batsy vitsivitsy izay nandaniako vola euro kely. Raha ny momba ny lantom-peony, dia marina ny lazainao amin'ny rindrambaiko sasany, saingy olana eo amin'ny rafitra fiasa RemiXOS izany ary amin'ny app sasany ihany no mitranga, ohatra amin'ny browser Google Chrome Beta ary tsy mandeha ny Google Chorme mahazatra, ohatra amin'ny Ny fampiharana Notes Color Note dia tsy mitranga, ohatra, miaraka amin'ny antontan-taratasin'i Google fa tsy mitranga izany, na dia milaza aza ianao fa marina fa mitranga amin'ny Apps sasany, dia raharaha fotsiny ny mitady ireo fampiharana tsy voakasik'ireo accents .
Etsy ankilany, ny Tablet dia tena kôkômbra misy terminal, amin'ny haavon'ny Tablets 400 euro na mihoatra ary bebe kokoa miaraka amin'ny klavier magnetika tsara. Tsy haiko hoe aiza no nividianan'ny namanao azy, fa raha miteny aminao amin'ny teny sinoa izy ary raha tsy afaka manetsika Espaniôla dia hifandray amin'ny magazay an-tserasera aho ary hanokatra fitakiana.
Jose luis gomez dia hoy izy:
Novidiko ilay takelaka ary avy amin'ny sinoa izy, ahoana no hanovako azy?
Tsy azoko na inona na inona ary tiako ho anao ny mamorona tutorial
Valiny tamin'i Jose Luis Gomez
Jose Miguel Romero Crespillo dia hoy izy:
manaitra ny takelaka. fa manana fisalasalana maro aho… ..ny voalohany dia ny sary tsy mihodina rehefa mihodina ny efijery ,,, ary ny faharoa dia ao amin'ny fizarana fikirakirana, rehefa manindry ny UPDATE aho, dia mankany amin'ny menio lehibe ,, ,, misy mahalala izay mitranga ????
Mamaly an'i jose miguel romero crespillo
Fampiharana tena ilaina amin'ny Takelaka Android: Androany CudaSign hanasonia nomerika ary hameno antontan-taratasy